Huawei Mate X2, namoaka ny tsipiriany rehetra mialoha ny fotoana | Androidsis
Huawei Mate X2, ny tsipiriany rehetra nivoaky mialoha ny fotoana
Huawei dia efa miomana ny hanolotra ilay fitaovana hafahafa atsy ho atsy, farafaharatsiny izay kasaina ao anatin'ny herinandro ho avy. Ny iray tamin'izy ireo dia nandalo ny TENAA tamin'ny volana Novambra manambara vaovao sasany, fa ankehitriny ny zava-drehetra dia voasivana amin'ny antsipiriany be talohan'ny nanambaran'ny mpanamboatra azy.
Huawei Mate X2 jereo ny zava-misy ankehitriny rehetra fa misy ny zava-misy, saingy mila manamafy izany ny orinasa amin'ny fihaonambe. Toy ny mpanamboatra hafa, ho entina an-tserasera amin'ny sehatra samihafa izy ireo ary tsy ampian'ny fampahalalam-baovao.
1 Ireo famaritana navoakan'ny Huawei Mate X2
2 Daty mety hahatongavanao
Ireo famaritana navoakan'ny Huawei Mate X2
Ho tonga ny Mate X2 miaraka amin'ny processeur Kirin 9000Chip iray ampy ahafahana manome hafainganana sy sary mitambatra hilalao karazana lohateny. Ny tontonana lehibe dia 8,01 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 2480 x 2200 teboka ary ny tontonana faharoa dia 6,45 santimetatra (2.700 x 1.116 teboka).
Huawei Mate X2 eo aloha dia hanana sensor 16 megapixelIzy io dia ho an'ny karazana voaravaka ary mbola ho hita eo raha toa ka miaraka aminy ny sensor jiro manodidina hanatsarana ny sary. Ny lehibe indrindra ao aoriana dia mikendry ny 50 megapixel, ny 16 megapixels faharoa, ny 12 megapixels fahatelo ary ny 8 megapixels fahefatra. Ny zoom optika dia 10x.
Ny endriny dia hitovy amin'ny an'ny maodely voalohany, na dia te-hanavao kely aza izahay ary mbola hita eo ihany ny sary voalohany asehon'ilay orinasa. Huawei Mate X2 dia hiasa amin'ny Android 10 toy ny mahazatra miaraka amin'ny EMUI miandry ny HarmonyOS, ka ho tonga miaraka amin'ny kinova farany sy ny fanavaozana azy. 4.400 mAh ny bateria miaraka amina entana 66W.
Daty mety hahatongavanao
El Fanambarana Huawei Mate X2 dia antenaina fa amin'ny tapany voalohany, Izy io dia haseho miaraka amin'ny andiany Huawei P50, izay kasaina havaozina ary soloina ny tsipika P40. Ankoatr'izay, ny Digital Chat Station dia nilaza fa milanja 295 grama izy ary 161.8 x 145.8 x 8.2 milimetatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Mate X2, ny tsipiriany rehetra nivoaky mialoha ny fotoana
Araraoty ny tany sy ny maherifonao amin'ny anjara asan'ny Rivengard
[VIDEO] Ny sary sy ny tontolon'ny nofinofy sy ny majika no lalao ANDROidsIS tsara indrindra tamin'ny volana Janoary